News - Delta waxay leedahay Asda-A3 servo drives waxay ku fiican yihiin robotics
Delta waxay leedahay Asda-A3 servo drives waxay ku fiican yihiin robotics
Delta waxay leedahay taxanaha Asda-A3 ee AC servo drives waxaa loogu talagalay codsiyada u baahan jawaab celin xawaare sare leh, saxsanaan sare iyo dhaqdhaqaaq siman.
Delta waxay ku andacoonaysaa in awooda dhaqdhaqaaqa ku dhex dhisan ee wadwadu ay “kufiican tahay” agabka mishiinada, wax soo saarka elaktrooniga, robotics iyo baakadaha/daabacaada/mashiinada dunta.
Shirkaddu waxay intaa ku dartay in Asda-A3 ay ka faa'iidaysanayso sifada cod-bixiyaha oo dhammaystiran oo bixisa waxqabad aad u wanaagsan iyo jawaab-celinta soo noqnoqda ee 3.1 kHz.
Tani kaliya ma dhimeyso waqtiga dejinta, laakiin sidoo kale waxay si weyn u kordhisaa wax soo saarka xallinta 24-bit.
Taasi waa 16,777,216 garaaca wadnaha / kacaanka, ama 46,603 garaaca wadnaha ee 1 degree. Filters Notch ee resonance iyo xakamaynta gariirka ayaa gacan ka gaysanaya hawlgalka mashiinka siman.
Software-ka-saaxiibtinimada leh ee isticmaalaha is-dhexgalka garaafyada iyo is-habaynta tooska ah waxay yaraynaysaa wakhtiga hawlgelinta waxayna fududaysaa hirgelinta.
Intaa waxaa dheer, naqshadaynta is haysta ee Asda-A3 taxanaha servo drives waxay si weyn u yaraynaysaa booska rakibaadda waxayna fududaysaa habaynta golaha xakamaynta.
ASDA-A3 waxa kale oo ka mid ah sifooyinka kontoroolka dhaqdhaqaaqa horumarsan sida E-CAM (si fiican loogu habeeyey xiirid duulaya iyo xiirid wareeg ah) iyo 99 hababka xakamaynta PR casriga ah ee dhaqdhaqaaqa hal dhidibka ah ee dabacsan.
Asda-A3 waxay siisaa hawl cusub oo xakamaynta gariirka iyo habaynta qaabeynta Asda-Soft si sahlan loo isticmaali karo oo loogu talagalay isticmaalayaasha si ay si dhakhso ah u dhamaystiraan shaqada is-habaynta ee servo.
Markaad codsanayso habab aad u jilicsan sida suumanka, Asda-A3 waxay dejinaysaa habka, taasoo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay dejiyaan mashiinadooda waqti xasilin yar.
Wadooyinka cusub ee servo waxaa ka mid ah filtarrada tooska ah ee xakamaynta resonance, raadinta resonances waqti yar si looga hortago burburka mashiinka (5 qaybood oo kala duwan oo filtarrada leh oo leh xajmi la hagaajin karo iyo xargaha soo noqnoqda ilaa 5000 Hz).
Intaa waxaa dheer, shaqada ogaanshaha nidaamka waxay xisaabin kartaa qallafsanaanta mashiinka iyada oo loo marayo isku-dhafka fiilooyinka viscous iyo joogtada gu'ga.
Cilad-sheegiddu waxay bixisaa tijaabinta u hoggaansanaanta goobaha qalabka waxayna bixisaa xogta xaaladda xirmidda muddada dheer si loo aqoonsado isbeddelada mashiinnada ama qalabka gabowga si loo bixiyo goobo habboon.
Waxa kale oo ay hubisaa in si buuxda loo xidho xakamaynta loop si loo meeleeyo saxnaanta iyo baabi'inta saamaynta dib-u-celinta.Designed for CanOpen iyo DMCNet oo leh gudaha STO (Safe Torque Off) shaqada (shahaadadu waxay sugaysaa).
Marka STO la hawlgeliyo, awoodda mootada waa la jarayaa. Asda-A3 waa 20% ka yar A2, taas oo macnaheedu yahay meel yar oo rakibidda.
Asda-A3 waxay taageertaa noocyo kala duwan oo matoorrada servo ah.Waxay hubisaa naqshadaynta gadaal u socota ee matoorka beddelka mustaqbalka.
ECM-A3 taxanaha servo motor waa magnet joogto ah oo sax ah oo AC servo motor ah, kaas oo lagu isticmaali karo 200-230 V Asda-A3 AC servo driver, awooduna waa ikhtiyaar laga bilaabo 50 W ilaa 750 W.
Xajmiga mootada waa 40 mm, 60 mm iyo 80 mm. Laba nooc oo matoor ah ayaa la heli karaa: ECM-A3H inertia sare iyo ECM-A3L hoose, oo lagu qiimeeyay 3000 rpm. Xawaaraha ugu badan waa 6000 rpm.
Wareegga ECM-A3H wuxuu leeyahay qulqulka ugu badan ee 0.557 Nm ilaa 8.36 Nm iyo ECN-A3L waxay leedahay qulqulka ugu badan ee 0.557 Nm ilaa 7.17 Nm
Waxa kale oo lagu dari karaa Asda-A3 220 V taxane servo drives in kala duwan ee awoodda ka 850 W ilaa 3 kW.Available size jir yihiin 100mm, 130mm iyo 180mm.
Qiyaasta wareegyada ikhtiyaariga ah ee 1000 rpm, 2000 rpm iyo 3000 rpm, xawaaraha ugu badan ee 3000 rpm iyo 5000 rpm, iyo ugu badnaan wareegyada 9.54 Nm ilaa 57.3 Nm.
Ku xidhan kaarka xakamaynta dhaqdhaqaaqa Delta iyo kantaroole otomaatig ah ee programmable MH1-S30D, nidaamka dariiqa toosan ee Delta wuxuu ku siin karaa xalal ku habboon codsiyada xakamaynta dhaqdhaqaaqa dhidibka badan ee warshadaha otomaatiga ah ee kala duwan.
Robotics and Automation News waxaa la aasaasay bishii May 2015 oo hadda waa mid ka mid ah goobaha loogu akhriska badan yahay nooceeda ah.
Fadlan ka fiirso inaad nagu taageerto adiga oo noqonaya macaamiil lacag ah, adoo isticmaalaya xayaysiis iyo kafaalaqaadyo, ama ka iibsanaya alaabada iyo adeegyada dukaankayaga - ama isku darka dhammaan kuwan kor ku xusan.
Mareegtan iyo wargeysyada la xidhiidha iyo wargeysyada toddobaadlaha ah waxaa soo saaray koox yar oo saxafiyiin khibrad leh iyo xirfadlayaal warbaahineed.
Haddii aad hayso wax talo ah ama faallo ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho mid ka mid ah ciwaannada emailka ee bogga xidhiidhkayaga.
Mitsubushi HMI Logic Controller Plc Servo Motor Ac Servo Drive 1kw Servo Motor Delta HMI